Isizinda se-Ultrasonic se-Mycoprotein - Hielscher Ultrasound Technology
I-Mycoprotein amaprotheni akhiqizwe ukhunta akhiqizwa ukusetshenziswa ngabantu, okusetshenziselwa kakhulu ukulungisa inyama noma "inyama yenkohliso". Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kanye ne-homogenization kuyindlela ephumelela kakhulu yokukhipha i-mycoprotein ku-fungus efinyelela ezithela kakhulu zamaprotheni ngesikhathi esifushane sokulungisa.
I-Mycoprotein iyiseli elilodwa lamaphrotheni akhona ku fungi. Ukunikeza inani eliphakeme lamaprotheni kanye ne-fiber, i-mycoprotein ibhekwa njengomthombo onempilo futhi ozinzile wama-amino acid anempilo. I-Mycoprotein iqukethe cishe amaprotheni ayi-45% ne-25% fiber ngesisindo esomile. I-Mycoprotein inothile kuma-amino acid abalulekile futhi yakhiwa ngokuqanjwa. Amaprotheni ayi-41% anikela ngokuqukethwe okufanayo kwamaprotheni ku-spirulina. Lokhu kwenza ukuthi i-mycoprotein ibe ngumthombo wamaprotheyini othakazelisa abasebenza imifino kanye nama-vegans. I-Mycoprotein inothile ku-fiber. Okuqukethwe kwayo kwe-fiber kubandakanya i-approx. ingxenye eyodwa kwezintathu (i-N-acetylglucosamine) nezinxenye ezimbili kwezintathu zama-β-glucans (1,3-glucan kanye ne-1,6-glucan). Ukunikeza ngamaprotheni amaningi kanye nokuqukethwe kwefayibha, i-mycoprotein ingumthombo wokudla onempilo futhi ongapheli.
(cf. uFinnigan et al. 2019)
I-Ultrasonic Mycoprotein Extraction
Ukuze ukhiqize i-mycoprotein, izinhlobo zezinhlavu ezidliwayo ziyatshalwa futhi zikhethwe kuma-bioreactors. Lokhu kusho ukuthi amaprotheni aboshelwe ezinhlotsheni zefungus, isib. Fusarium venenatum. Ukuze ukhulule i-mycoprotein, inqubo yokuphazamiseka kwamaseli enamandla nokukhishwa kuyadingeka, efaka ukhunta. Ngesikhathi sokuxilongwa, izindonga zeseli ze-microorganism ziyaphazamiseka futhi zidilizwe ukuze izinto eziwumgogodla ezinjengamaprotheni, i-lipid nezinye izakhi zikhishwe. I-Ultrasonication iyindlela esekwe kahle esetshenziselwa ukukhiqizwa kokudla kanye ne-biotechnology ukuphazamisa amaseli nezicubu nokukhipha amakhompiyutha abalulekile. Ngaphezu kwalokho, i-homogenization efanayo efinyelelwa yi-ultrasonization yenza kube lula ukuguqula i-mycoprotein ibe yimikhiqizo yokudla emisha enezinto ezahlukahlukene zokwenziwa, ukunambitheka, kanye nokusetshenziswa, kufaka phakathi i-analogue yenyama, ukudla okulula okudla okunamaprotheni, ukufakwa esikhundleni sobisi kanye nama-dessert.
Ama-Kinetics ekhishwa ngamaprotheni avela kuFusarium Venenatum yi-sonication ngokugaya
umthombo: Prakash et al. 2014
Ucwaningo lwesigameko – Ukukhishwa kwe-Ultrasonic Mycoprotein
Prakash et al. (2014) iphenye imiphumela ye-ultrasonication ekukhululweni kwe-mycoprotein ku-Fusarium Venenatum. Bazuze inani eliphakeme lokukhishwa kwamaprotheni K we-0,680 min nge-580μg ye-mycoprotein ekhishwe.
Umphumela we-sonication ngendlela yokugaya ekukhulisweni kwamaprotheni we-Fusarium venenatum
Izinzuzo zesizinda se-Ultrasonic Mycoprotein
Isivuno esikhulu / ukukhishwa okuphelele
Isizinda se-Ultrasonic – Ukusebenza Ngumgomo kanye Nezinzuzo
Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kusekelwe kumcimbi we-acoustic (ultrasonic) cavitation. Lapho amagagasi anamandla e-ultrasound ehlanganiswa abe yi-liquid noma i-slurry, kuguquguquka imijikelezo ephezulu kanye nengcindezi ephansi futhi anwebise uketshezi olwakha amaminithi we-vacuum ngemizuzu ephakathi. Lawo ma-bubu we-vacuum akhula ngaphezu kwemijikelezo ephezulu yengcindezi / ephansi aze afinyelele eqophelweni lapho i-bubble yegesi ingakwazi ukudonsa amanye amandla. Ephuzwini lokukhula okuphezulu, i-bubble ifakwa ngobudlova ngesikhathi sokujikeleza okukhulu. Ngesikhathi sokufakwa kwe-bubble, izimo zasendaweni ezedlulele njengokushisa okuphezulu kakhulu, izingcindezi nengcindezi ehambisanayo kanye nokwehluka kwezinga lokushisa kanye namajethi awuketshezi afinyelela ku-280m / sec. Lawa mandla amakhulu agcobisa futhi aphule izindonga zeseli futhi aqhakambisa ukudluliselwa kwenqwaba phakathi kokuphakathi kweseli noluketshezi oluzungezile. Izinto ezi-intracellular ezinjengamaprotheni, ama-lipid nezinye izinto ezihlanganisiwe zidluliselwa ku-ketshezi zisuka lapho zingahlukaniswa kalula izinqubo ezansi nomfula.
Ultrasonically wasiza isizinda (UAE) kuyindlela esebenza kahle kakhulu yokukhulula nokuhlukanisa izinto ezingaphakathi njengamaprotheni, ama-lipids, nezinto eziqukethe izinto eziphilayo (isib. amavithamini nama-polyphenols). I-Sonization inqubo yokuqinisa, ekhulisa ukudluliselwa kwesisindo phakathi kokuphakathi kweseli noluketshezi. Ukukhishwa kwe-Ultrasonic kuholela ezithelweni eziphakeme, isikhathi sokuncishiswa esincishisiwe, ikhwalithi ephezulu yokukhipha, kanye nezindleko zokunciphisa ezincishisiwe kanye nokusetshenziswa okuphansi kwamandla.
Ama-Ultrasonic Homogenizer we-Mycoprotein Processing
Abaphazamisi beseli be-Ultrasonic kanye nabavikeli bangamathuluzi asungulwe kahle kwizakhiwo zokulungisa ukudla. Ukunikeza amabutho we-cavitational high-shear Force, ama-ultrasonicators asetshenziselwa ukwahlukanisa amakhompiyutha we-bioactive kusuka kuzitshalo zezitshalo kanye nokuqamba izigaba ezimbili noma ngaphezulu kumxube ofanayo.
I-Hielscher Ultrasonics inikezela ngephothifoliyo ebanzi yama-ultrasonicators asebenza kahle ukusuka kwelebhu kuye ngosayizi wezimboni.
Izithasiselo, ezisetshenziswa ekudleni noma ekhemisi, kufanele zikhiqizwe ngokuya nge-Okuhle Ukukhiqiza Izinto (i-GMP) nangaphansi kokucaciswa kokusebenza okuhlelekile. Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics 'zokukhishwa kwedijithali ziza ne-software ekhaliphile, eyenza kube lula ukusetha nokulawula inqubo ye-sonication ngokunembile. Ukuqoshwa kwedatha ye-othomathikhi kubhala yonke imingcele yenqubo ye-ultrasonic efana namandla e-ultrasound (inani eliphelele namandla e-net), amplitude, izinga lokushisa, ingcindezi (lapho izinzwa ze-temp kanye nezingcindezi zifakwa) ngedethi nesikhathi nesikhathi esakhelwe ku-SD-khadi. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuyekeze kabusha inkatho ngayinye eyenziwe ngobunyoninco. Ngasikhathi sinye, ukuqinisekiswa kabusha kwekhwalithi ephezulu yomkhiqizo kuyaqinisekiswa.
I-Mycoprotein yiprotheni elilodwa elibizwa ngokuthi i-single-cell, okusho ukuthi lithathwe esakhiweni esisodwa samaseli. Kwi-mycoprotein, isitho esisodwa samaseli sisikhunta. Ngakho-ke, i-mycoprotein yaziwa nangokuthi iprotheni fungal. Isilabhasi ethi “myco” lisuselwa kwelesiGreek elithi "mykes", elisho ukhunta.
Ekhiqizweni kwe-mycoprotein, iFusarium venenatum yi-fungus evame ukusetshenziswa. I-microfungus ye-genus Fusarium futhi inikeza okuqukethwe okunamaprotheni amaningi.
Ukuze ukhiqize i-mycoprotein kwezentengiselwano, isikhunta esikhunta siyakhwezwa futhi sithosiwe kumhluzi weglucose nezinye izakhi. Izinyathelo zokugcina ezilandelwayo zibandakanya ukubamba, ukubanda, kanye nokubanda kwe-RNA encishisiwe fungal biomass. Ekugcineni, kutholakala isisindo esinamaprotheni amaningi ne-high-fiber, esingashintshwa emikhiqizweni ehlukahlukene yokudla enjengeendawo zokufaka inyama noma izithasiselo zokudla. I-Mycoprotein isetshenziselwa ukukhiqiza okubizwa nge- “nyama fake”, okuyi-substitutes yenyama noma i-analogue yenyama.